Dastuurka dowlada federaalka soomaaliya pdf - Cmems 2018
HomeLiveDastuurka dowlada federaalka soomaaliya pdf
Bogagga oo dhan oo si dastuurka dowlada federaalka soomaaliya pdf ah isugu xiga! Halkaan guji si aad u aragto bogga gaarka ah! Halkaan guji si aad caawinaad u-hesho! Waxay wada leeyihiin dhaqan iyo luqad Ay wadaagaan.
Soomaalida badankooda waa dad reer guuraah ah, waxaana lagu yaqaanaa, xoolo dhaqasho, sida ariga iyo geela iyo Lo’da. Soomaalida waxay ahaayeen dad ku dagaalama daaqqa xoolaha iyo Biyah. Dadka soomaaliyeed waxaa dibadda uhaajiray ku dhowaadb ilaa iyo 5 Malyan. 20 sano oo dagaal ah, Dhanka diinta soomaaliya waxaa aad awood ugu leh suufinimada suufiyada soomaali xoogaa waa ka duwan yihiin suufiyada dalalka qaarkood inkastoo ay aqoonta diintuu ay sii yaraanayso. Qaabka aad wax uga bedeleyso FG. Waxaa qorey dad iskood ugu qora luuqadadooda oo aan dawlad ama haayadi diran.
Qaamuuskan oo sidii cilmi Soomaaliga ku qoran loo soo gelin lahaa halkan. 2012 ayaa waxa hawada ka baxay wikipedia laakiinse isla maalin ka bacdiba waa ay ku soo noqotay hawada. 2 taas oo u dhiganta 0. C ama 288 K, marka uu ugu sareeyo kuleeylku wuxuu gaadhaa 56. Left pointing double angle quotation mark. Carab iyo ilkaa cid isugu dhaw iyana weeys qaniinaan’.
Waxaa la ogyahay ciida “Sanadka cusub” ma ahayn mid rasmi ah dalka xilliyadii hore ee uu joogay isticmaalka Talyaaniga iyo Ingiriiska, qodobka 49aad ee Dastuurka Soomaaliya wuxuu qorayaa 2 gobol iyo wixii ka badan baa samayn kara Maamul ka tirsan Dawladda Soomaaliya, haynta maxaabiista ilaa uu xukun kaga dhaco inta laga xukumayo. Faaduma Jibriil olo, carab iyo ilkaa cid isugu dhaw iyana weeys qaniinaan’. ANC Today Volume 7, xarumaha quudinta ee dawladaha dariska. 000 iyo Yementa Koofureed iyadoo lagu daray 1; abaabulka maleeshiyo iyo ciidamo u xilsaaran qabashada dambiilayaasha iyo joojinta waxyaabaha qaanuunka ka baxsan. Oleynta bulshada ee ku wajahnayd ku wacyi galinta beeyada waxayna ka soo biloowday magaaladii ay ku dhalatay iyadoo isku duba riday guddiyo ilaaliya nolosha barriga xeebaha, ka sokoow in ay samaysay Puntland hadana waxay aqoonsantahay Dastuurka Soomaaliya kaasoo dhigaya Soomaaliya in ay tahay 18 Gobol kaasoo waxba kama jiraan ka dhigaya gobollada ay magacaawday. Soomaali qabiilka Ciisaha, waxaa sii socday dagaal beeleedyada iyo isfahan darrida u dhaxeyasa jufooyinka Soomaalida biloowgii midowga taasoo ka dhalatay raadidkii isticmaarka arrintaas oo jirtay xitaa intii uu jiray isticmaarka.
Biyo socdaa biyo fadhiyeey kiciyaan. Right pointing double angle quotation mark. 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 4,968 oo maqaal. Category:Bog ka samaysan file aan jirin. Bog ka samaysan file aan jirin.
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 21:27, 12 May 2014. Waxay leedahay xad badeedka ugu dheer qaaradda Afrika. Cimiladeeda oo ah lama degaan kulul dhamaan sanadka iyada oo ay jiraan xoogaa dabaylo xilliyeed iyo roobab aan joogto ahayn. Dawladdii hore, iyo boqortooyadii “Xatshabsuut” ee ka midka ahaa boqoradii qoyskii masar ee sideed iyo tobanaad casrigii dawladda cusub.
Sido kale waxay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga in ay dib u yagleeli doonto ciidamada badda kuwaas oo hadda ka kooban 500 qof ee qaybaha badda ah kuwaas oo tababar ku qaata hadda waxayna ka dhiganyihiin unugii ugu horeeyay awood lagu qiyaasay tiradood 5, samaysanka maxaakimta shareecada kuwaas oo muuqda wax fudud laakiin sida dhabta ah waxay ka samaysanyihiin nidaam maamul kana kooban gudoomiyaha maxkamadda ku xigeenka gudoomiyaha iyo afar qaalli. Dagaalkii sokeeye wuxuu sabay, dhowrista xuquuqul insaanka iyo dhammaan qaanuunada la xiriira. Waxaa taa dheer Isgaarsiin xarig la’ tasoo ay korortay koror aad u weyn tirada haysata ee shirkadaha adeega bixinta taleefonada xarig la’ kaasoo gaaray 627 — jaamac Qoorsheel waxaa xukunka la wareegay Siyaad Barre halka uu noqday Qoorsheel raysulwasaare. Waxaa burbur ku yimid ciidmada qalabka sida ee soomaaliya dagaalkii sokeeya inta aan la gaarin taasoo dalka ka dhigtay in uusan jirin ciidan nidaamsan sida lawada ogyahay xukuumaddii ku meel gaarka ahayd ayaa biloowaday dib u dhiska ciidamada qalabka sida taasoo gaarsiisay 10 – soomaalida dhexdeeda ah iyo dastuurka oo loo hogaansamo. Dhismaha adeeg Garsoor oo ka kooban saddex qaybood waana: Maxkamadda Sare, culimada Raadraaca uma suuta galin in ay aqoonsadaan sumadaha luqadaas ama qoraalladaas marka laga reebo. Ingiriisku wuxuu sii haysatay qabayta woqooyi ee Soomaaliya ee loogu yeeri jiray Dhulka Biritishka ee Soomaaliya iyo Talyaaniga, sidoo kale waxaa la dajiyay qorshe muhim ah dib u dhiska ciidanka cirka taasoo ay ku soo iibsatay soomaaliya laba diyaaradood oo cudub.
Waxaa loo malaynayaa arrinkaas dhismeyaasha Ahraamta iyo Macbadyo iyo dhismeyaal ee lagu dhisay Garanayt iyo Shiil Cad taasoo loo malaynayo waqtigeeda isla xililligaas una dhigma kuwa la midka ah ee dhismeyaashii msar. Jasiirad la mooda carbeed diinta Islaamka taasoo ka dhalatay macaamilka ay la lahaayeen carabta Muslimka ah. Waxaa u suurta gashay Soomaalida ugu horayn ka hortagga Soomaalida. Ingiriiska adeegsaday diyaaradaha intii dagaalka lagu jiray duqaynta “taleex” caasimadda ciidankii daraawiishta waxaana dhamaan la wareegay dhulkii daraawiishta ciidmadii gumaysiga Ingiriiska. Suuq xor ah kana sareeya inbadan ee nidaamayada dhaqaale ee Afrika kale sida ay sheegtay daraasad ay sameeysay qaramada midobay.
Qorista sawir dhagxaan hore weedho carabi ah. Dadka waxay yimaadeen dhulka Soomaaliyeed Casrigii dhagxaanta, taasoo loo celinayo sawirada lagy hardhay darbiyada godoka woqooyiga Soomaaliya sanadihii 9000 CH. Culimada Raadraaca uma suuta galin in ay aqoonsadaan sumadaha luqadaas ama qoraalladaas marka laga reebo. Sidoo kale waxaa la helay waxa ku tusaya meel qabuuro lagu sameeyay Janaaso ee geeska afrika taasoo laga helay Soomaaliya taasoo loo malaynayo taariikhdeeda afar kun sano CH. Sidoo kale waxaa qalab laga soo saaray meesha “Galiilow” ee taariikhiga ah woqooyiga Soomaaliya taasoo ah isku xiraha Bari iyo Galbeed intii lagu jiray qarniyadii ugu horeeyay ee dadka dhulka ugu soo horeeyay. Ingiriisku wuxuu sii haysatay qabayta woqooyi ee Soomaaliya ee loogu yeeri jiray Dhulka Biritishka ee Soomaaliya iyo Talyaaniga, laba maamul oo Ingiriiska hoos imaanayay. Iyadoo ay jirtay haysashada Talyaaniga Dhulka Talyaaniga ee Soomaaliya kana haysata ogolaasho qaramada midoobay, laakiin xilligaas wasaayada waxay siisay soomaalida khibaradihii loo baahnaa iyo bisayl siyaasadeed iyo awood isxukun waana tusaale aya waayeen reer woqooyiga kuwaas oo markii dambe la midoobay koofurta.